‘बेहाल अवस्था छ, सहयोग गर्नुस्’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
‘बेहाल अवस्था छ, सहयोग गर्नुस्’
संक्रमितले जिल्ला अस्पतालका बरन्डा भरिए
कपिलवस्तु — जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. गणेश क्षत्रीले ‘संक्रमितको उपचारमा खटिएको म एक डाक्टर’ भन्दै बिहीबार बिहान बिरामीले भरिएको तस्बिरसहित फेसबुकमा स्टाटस लेखे । उनको त्यो भावुक स्टाटसले धेरैलाई छोएको छ । यहाँका अस्पतालको कारुणिक अवस्था झल्काएको छ ।
कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पतालमा शय्या नपाएपछि बरन्डामा नैउपचार गराइरहेका संक्रमित । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर
उनले लेखेका छन्, ‘स्थिति विकराल छ । तर तर्साउन खोजेको होइन । अवस्था साँच्चै बेहाल छ । अस्पतालका इमर्जेन्सी, वार्ड, आईसीयू र कोरोना अस्पताल भरिएका छन् । मृत्युदर दिनानुदिन बढ्दो छ । अक्सिजन र औषधि मात्रै चाहिने लक्षण देखिएका संक्रमित राख्ने ठाउँ छैन । आईसीयू र भेन्टिलेटर कहाँ हो कहाँ, अब अति भइसकेको छ । अझ बेहाल हुनेवाला छ । हामी स्वास्थ्यकर्मी हात जोडेर बिन्ती गर्छौं । सरोकारवालाले केही गर्नूस् । राजनीतिक भागबन्डा गर्दै बस्ने होइन । बाँचियो भने धेरै गरौंला । नत्र छटपटाउँदै मर्नुको विकल्प छैन । जुन भइरहेको छ । कृपया जसले सक्छ सहयोग गर्नूस् । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरणा दिनूस् ।’
यहाँ सुविधा उपलब्ध एकमात्र जिल्ला अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमित बिरामीले भरिएको छ । इमर्जेन्सी र अस्पतालको बरन्डामा २० जना बिरामी छन् । बेड नपाएर भुइँमा उपचार गरिरहनुपरेको छ । लक्षण देखिएका तर स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नआएका बिरामी पनि उत्तिकै छन् । उनीहरू सबैलाई अक्सिजन चढाउनु परेको छ । नजिकै चपरतल्लामा रहेको साविकको महिला विकास कार्यालयमा बनाइएको कोरोना अस्थायी अस्पतालका २० बेड पनि संक्रमितले भरिएका छन् । ‘अब राख्ने ठाउँ छैन,’ मेडिकल अधिकृत डा. क्षत्रीले भने, ‘आएकालाई बरन्डामा राख्नुपर्छ ।’ अस्पतालको आईसीयू र वार्डमा २५ जना बिरामी छन् । यहाँ जति बिरामी छन्, सबैलाई औषधि र अक्सिजन सपोर्ट आवश्यक रहेको क्षत्रीले बताए ।
बिहीबार तौलिहवास्थित कोरोना अस्थायी अस्पतालमा यशोधरा गाउँपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकाका ५८ र ४५ वर्षे पुरुषको मृत्यु भयो । दैनिक ४० अक्सिजनका सिलिन्डर खपत हुन्छन् । दिनदिनै अक्सिजन सिलिन्डर बुटवलबाट भरेर ल्याउनुपर्छ । ‘एक पटकको खर्च ५०/६० हजार पुग्छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले भने, ‘कसरी थेग्नु खर्च ?’ जनशक्ति अभाव हुँदा अहिले ओपीडी बन्द गरिएको छ । इमर्जेन्सीमा दाँत र आँखाका डाक्टर खटाइएको छ । एउटा अस्पतालको जनशक्तिले दुईवटा अस्पताल चलाउनुपरेको छ । बेग्लै ठाउँमा कोभिड अस्पताल र पीसीआर ल्याब चलाइएको छ । त्यहाँ अस्पतालकै जनशक्ति गएका छन् ।
आइतबारदेखि सञ्चालित अस्पतालमा एक डाक्टर र चार नर्सिङ स्टाफ २४ सै घण्टा खटिएका छन् । अस्पतालको जनशक्तिलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । एक समूहले फिभर क्लिनिक, दोस्रोले प्रसूति सेवा र इमर्जेन्सी तथा तेस्रोले अस्थायी कोभिड अस्पताल चलाएका छन् । अहिले अस्पताललाई १० डाक्टर र २० नर्सिङ स्टाफ आवश्यक भएको डा. बन्जाडेले बताए । त्यस्तै आठ जना ल्याब र २० भन्दा बढी सफाइ र सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । ल्याबको रिएजेन्ट सकिएर बुधबार कामै बन्द भयो । ‘काठमाडौंबाट एक हजार रिएजेन्ट आएको छ,’ ल्याब प्रमुख राकेश साहले भने, ‘त्यो साता दिन चल्छ ।’ त्यसपछि आउने नआउने कुनै ठेगान नभएको उनले बताए । जनशक्ति अभाव हुँदा ल्याब पनि फुलफेजमा चलाउन नसकिएको उनले बताए ।
अस्पतालमा बजेट अभाव चर्को छ । साताअघि प्रदेश सरकारले अक्सिजन पाइप बिछ्याउन अस्पताललाई २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर रकम अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । ‘अहिले चाहिएको छ,’ डा. जाबेद खानले भने, ‘कहिले टेन्डर निकाल्ने हो, कहिले जोड्ने हो ?’ जिल्लाका सबै ठाउँबाट उपचारका लागि बिरामी यहाँ आउँछन् । कपिलवस्तु नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । अन्य स्थानीय तह कसैले पनि कुनै सहयोग गरेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष जेठमा यहाँका स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा ६/६ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । अहिलेसम्म कसैले रकम दिएका छैनन् । साधनस्रोत कम भएकाले उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन समस्या भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले बताए । ‘हाम्रो कुरा सुन्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हारगुहार गरेका हौं ।’
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०८:२७
प्रसूति सेवा लिनेको भीड
वैशाख २४, २०७८ कमल पन्थी
बर्दिया — बाँकेको खजुरा नगरपालिका–६ की २७ वर्षीया महिला सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि आइतबार बर्दियास्थित जिल्ला अस्पताल गुलरियामा आइन् । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल कोरोना संक्रमणका बिरामीले भरिएपछि त्यहाँ प्रसूति सेवा प्रभावित छ । त्यसैले उनी यहाँको अस्पताल आएकी हुन् । उनले आइतबार नै शल्यक्रियामार्फत छोरा जन्माएकी छन् ।
राजापुर नगरपालिका–५ की २५ वर्षीया गर्भवतीको बच्चा उल्टो परेपछि गुलरियाको अस्पतालमा आइन् । उनको सफल शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माइयो । उनीहरूजस्तै दिनहुँ छ/सात जना जटिल खालका गर्भवती शल्यक्रियाका लागि यहाँ आउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल कोभिड अस्पताल नभएका कारण बर्दियालगायत बाँके, कैलालीबाट पनि सुत्केरी हुन गुलरियाको जिल्ला अस्पताल आउने गर्भवतीको संख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ सुत्केरी हुन आउनेको एन्टिजेन वा पीसीआर परीक्षण भने गरिंदैन ।
परीक्षण गर्न लाग्दा समय लाग्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता आमा र बच्चाको ज्यान बचाउनु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुभास पाण्डेयले बताए । ‘जोखिम मोलेर हामी शल्यक्रिया गर्छौं । लक्षण देखिए सुरक्षित रूपमा थप उपचार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्दै शल्यक्रिया गराउँदा यहाँका धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् ।’
अस्पतालका दुई डाक्टर, एक स्टाफ नर्सका साथै रेडियोग्राफर, प्रशासन कार्यालयका लेखा सहयोगी, एआरटी स्टाफ, फार्मेसीका एक कर्मचारी पनि संक्रमित भएको मेसु पाण्डेयले बताए । जनशक्ति अभावमा अहिले दैनिक एक सय बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिंदै आएको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ केशर चौधरीले बताए । उनी स्वयं पनि संक्रमित भएका छन् । निषेधाज्ञा जारी भए पनि सुत्केरी हुन यहाँ आउनेको संख्यामा कमी नआएको डा. विजय उपाध्यायले बताए । वैशाख १ गतेदेखि मंगलबारसम्म बर्दिया अस्पतालमा १ सय ५ जना सुत्केरी भएका छन् ।
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७८ ०८:२४